तानसेनका होटल तथा रेष्टुरेण्ट स्तरीकरण, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं । खाद्य स्वच्छताका आधारमा तानसेनका होटल तथा रेष्टुरेण्ट स्तरीकरण गरिएको छ।
प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, स्थानीय खाद्य स्वच्छता समूह पाल्पाले तानसेनका होटलमा प्रतीक चिह्नसमेत वितरण गरेको छ। तानसेनका २६ होटल मध्यम, चार उत्तम, नौ सन्तोषजनक र ६ सामान्यमा होटल स्तरीकरण गरिएको छ।
उत्तममा नीलो कार्डमा दुई वटा तारा, सन्तोषजनकमा नीलो कार्डमा एउटा तारा, सामान्य पहेँलो लोगो होटलमा टाँसिएको हो। तानसेनका १९ होटल मात्र स्तरीकरण गरिएको प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, पाल्पाका प्रमुख नरेश श्रेष्ठले बताए।
तानसेनका सात होटल खाद्य स्वच्छताको मापदण्डबाहिर रहेको भेटिएको छ। पाल्पाका अधिकांश होटलको स्वच्छताका आधारमा निकै कमजोर रहेको देखिएको हो। स्तरीकरणमा परेका होटललाई लोगो र प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले प्रमाणपत्र प्रदान गरेको श्रेष्ठले बताए।
तानसेन नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी पाठकले असल होटल व्यवसायीहरुले ताजा र गुणस्तरीय खाजा नास्ता खुवाउनुपर्ने बताइन्। तानसेनका होटल व्यवसाय अझै राम्रो बनाउन आवश्यक रहेको उपप्रमुख पाठकले बताइन्।
पर्यटकीय क्षेत्र रहेको तानसेनमा होटल व्यवसायको राम्रो सम्भावना रहेकाले व्यवस्थित बनाउन तानसेन नगरपालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे। होटल व्यवसायी जीवलाल सुवेदीले होटलहरुलाई व्यवस्थित गरिने बताए।
प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको नेतृत्वमा तानसेनका होटलहरुमा पटक पटक अनुगमन गरिएको थियो। सोही अनुगमनका आधारमा तानसेनका होटलको स्तरीकरण गरिएको हो।